Guddiga loo xil saaray dadkii lagu laayay duleedka Balanballe oo ka warbixiyay halka ay wax marayaan | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Guddiga loo xil saaray dadkii lagu laayay duleedka Balanballe oo ka warbixiyay...
Guriceel (Halqaran.com) – Guddiyadii labada ahaa ee loo xilsaaray dhacdadii deegaanka Xirsi Lugeey garabkii aaday dhanka Guriceel ayaa ku simaha Madaxwaynaha ahna Madaxwayne ku xigeenka Galmudug Cali Daahir Ciid uga warbixiyay halka wax u marayaan.
Axmed Xasan Cali ayaa sheegay in Odayaasha Dhaqanka degmada Guriceel ay la kulmeen ay u soo dhibeen farriin ah in Maamulka Galmudug uu waxka qabto dhibaatooyinka dilalka ah ee kusoo laab laabtay degaannada Galmudug.
Sidoo kale, waxaa uu sheegay in muddo todobaad ah kadib ay dib ugu laaban doonaan degmada Guriceel si Odayaasha Dhaqanka iyo Maamulka degmada ay ugala hadlaan xalka gaarista dhacdadii dadka Shacabka ahaa lagu dilay.
Dhinaca kale, Madaxweyne ku-xigeenka Maamulka Galmudug Cali Daahir Ciid oo isna hadlay ayaa balan qaaday in ka Maamul ahaan inay gacanta kusoo dhigi doonaan dadkii ka dambeeyay dilka dadka Shacabka ahaa si Cadaaladda loo horkeeno.
Si kastaba, labadii sano ee la soo dhaafay ayaa waxaa deegaannada Galmudug kusoo batay Colaad beeleedyada iyo dilalka aanooyinka qabiilka, iyada oo ay ku guul-dareesteen Madaxda Galmudug inay waxka qabtaan.
dadkii lagu laayay Balanballe
Guddiga loo xil saaray